Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) - Hello Sayarwon
Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ)
Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Gastropulgite® ကို အစာမြိုပြွန်နှင့် အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ပြသနာများကြောင့်ဖြစ်သော နာကျင်မှုကို သက်သာရန် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
တနေ့လျှင် တစ်ထုတ်ကို ရေဖန်ခွက်တဝက်ခန့်တွင် ဖျော်ပြီး အစာစားပြီးအောင့်ခြင်းများ အတွက် သောက်သုံးနိုင်သည်။
Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Gastropulgite®ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့ရန်၊ မစိုစွတ်မှုမရှိစေရန် အခန်းအပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်စေရန် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Gastropulgite®ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသည့် ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘူးအခွံတွင် ပါသည့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Gastropulgite®ကို အိမ်သာတွင်း ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းကို မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့လျှင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားလျှင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ ဆေးဝါးများအား စနစ်တကျ မည်သို့ စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုသည်ကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်၏ ဝမ်းထဲတွင် သွေး (သို့) အမြှုပ်ပါလျှင်၊ citrate salt သုံးစွဲနေလျှင် (ကယ်လစီယမ်ဖြည့်စွက်စာများ၊ အစာအိမ်သောက်ဆေးများ၊ ဝမ်းနုတ်ဆေးများ စသည်တို့)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Gastropulgite® ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများ၊ ကလေးထိခိုက်ခြင်းများ မရှိပါ။ အစာအိမ်အနာပျောက်ဆေးများသည် ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်တွင် လိုအပ်သောအခါ သောက်သုံးနိုင်သည်။
Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးများကဲ့သို့ Gastropulgite®တွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိပါသည် အများစုမှာ မဖြစ်ပွားတတ်ပါ။ အောက်ပါပြသနာများ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Gastropulgite®သည် သင်ယခု သောက်သုံးနေသည့် တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသည့် ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် သို့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။) Gastropulgite®သည်
Quinidine ၏ သွေးတင်းပါဝင်မှုကို မြင့်တက်စေပြီး ပမာဏလွန်ကဲစေသည်။
ဆီးကို အလ်ကာလိုင်းဓါတ်များစေခြင်းဖြင့် salicylates ကို ဆီးမှစွန့်ထုတ်ခြင်းကို မြင့်တက်စေသည်။
အက်ဆစ်ဓါတ်ပြယ်စေသော အစာအိမ်ဆေးများသည် aluminium၊ calcium၊ magnesium salts စသည်တိုပပါဝင်ပြီး အခြားသောက်ဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများ ရှိသည်။ ဆေးများကို အူလမ်းကြောင်းမှ စုပ်ယူမှုအား လျော့နည်းစေသည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင် Gastropulgite® ကို အောက်ပါဆေးများ မသောက်မီ ၂နာရီခန့် အနည်းဆုံးစောပြီး သောက်သုံးသင့်သည်။
Glucocorticoids (prednisolone ၊ dexamethasone);
အခြား: chloroquine, diflunisal, digoxin (သောက်ဆေး); biphosphonates (oral route); sodium fluoride စသည်တို့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Gastropulgite® သည် အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်မလာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Gastropulgite®သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနျေနှင့် ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အောက်ပါအခြေအနေများရှိလျှင် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Activated attapulgite of Mormoiron နှင့် co-dried aluminium hydroxide-magnesium carbonate gel (သို့) Gastropulgite® တွင် ပါဝင်သောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တနေ့လျှင် တစ်ထုတ်ကို ရေဖန်ခွက်တဝက်ခန့်တွင် ဖျော်ပြီး အစာစားပြီးအောင့်ခြင်းများ အတွက် သောက်သုံးနိုင်သည်။ တနေ့ ၆ထုတ်ထက်ကျော်၍ သောက်ရန် ညွှန်မထားပါ။
ကလေးတွေအတွက် Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်၍ တနေ့လျှင် တစ်ထုတ်၏ သုံးပုံတပုံမှ တထုတ်အထိ သောက်သုံးနိုင်သည်။
Gastropulgite® (အကြောင်း သိကောင်းစရာ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Gastropulgite®ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အခြောက်ခံထားသော ဂျယ်လီမှုန့်ပုံစံဖြင့် ၅၀၀မီလီဂရမ်
Gastropulgite®ဆေးကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့လျှင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံး သောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုလျှင် လွတ်သွားသည့်အကြိမ်ကို ကျော်၍ ပုံမှန်အချိန်တွင်သာ သောက်သုံးပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။